एलईडी डिस्प्ले भिडियो भित्ता आकर्षित को तीन कारक - चीन शीर्ष नेतृत्वमा भिडियो भित्ता कारखाना निर्माता
अब हामी सडक मा एलईडी डिस्प्ले स्क्रिन देख्न सक्छौं, वर्ग, मनोरन्जन ठाउँहरू, घर जग्गा उद्योग, सिनेमा, स्टेशन र अन्य ठाउँहरु. के तपाइँ जान्नुहुन्छ किन एलईडी डिस्प्ले स्क्रिन यति लोकप्रिय छ? यो सबै उच्च रंग कमी को यसको लाभ द्वारा ल्याईएको दृश्य प्रभाव बाट आउँछ, कम विद्युत खपत, उच्च परिभाषा र बलियो अनुकूलता.
क्रम मा कम्पनी को प्रदर्शन मा सुधार र दर्शकहरुको ध्यान कब्जा गर्न को लागी, यो एक धेरै महत्वपूर्ण कदम हो. केवल मानिसहरुको ध्यान आकर्षित गरेर उत्पादन जानकारी लाई थप प्रचार गर्न सकिन्छ. एलईडी डिस्प्ले यसको उत्कृष्ट प्रदर्शन को लागी धेरै प्रदर्शनहरु बीच बाहिर खडा छ. विज्ञापन को लागी एलईडी डिस्प्ले को उपयोग विज्ञापन उद्योग मा एक आम सहमति पुग्यो. अपेक्षित सामग्री वितरण गर्नुहोस्, ग्राहकहरु को मुख्य आवश्यकताहरु लाई पूरा, र अन्तमा रूपान्तरण दर प्राप्त.
एलईडी कारकहरु लाई लोकप्रिय बनाउने दुई कारकहरुमा एक नजर राखौं:
1. चमक आत्म समायोजन कुनै पनी समय मा सबै भन्दा राम्रो प्रभाव प्रदर्शन गर्न को लागी हो. विज्ञापनले देखाउँछ कि सबैभन्दा घृणित कुरा यो हो कि यो चम्किन्छ र मानिसहरुको आँखामा छुरा छ, तर प्रदर्शन कुनै अस्तित्व को भावना बिना मंद छ. चमक आत्म समायोजन, तपाइँ वातावरण को चमक अनुसार तपाइँको चमक समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ, र कुनै पनी समय मा आँखा को लागी सामग्री प्रदर्शन.
2. फराकिलो रंग गामुट, सही प्रदर्शन र साँचो सामग्री।? अन्य प्रदर्शन संग तुलना, एलईडी डिस्प्ले एक फराकिलो रंग सरगम ​​प्रदान गर्दछ र राम्रो छवि गुणस्तर ल्याउँछ.
सही प्रदर्शन छनौट गर्न एलईडी डिस्प्लेको मूल्य एक कारक हो?